EU iyo Soomaaliya oo si kulul uga wada-hadlay horumarinta ururku u qorsheeyey dalka Soomaaliya – Radio Daljir
Nofeembar 28, 2013 2:28 b 0
Brussels, November 28, 2013 – Magaalada Brussels ee xaruunta dalka Belgium oo uu ka socday shirka horumarinta midowga Yurub isla markaasna ay ka qayb-galeen madax ka socda caalamka oo ay ku jirto Soomaaliya ayaa xalay soo dhamaaday, balse waxaa la baahiyey in muran siyaasaddeed dhex-maray wefdigii Soomaaliya iyo madaxda Yurub.
Wasiirka arrimaha dibedda ee Soomaaliya marwo Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan ayaa shirka ka sheegtay in midowga Yurub aysan wax dhaqaale ah soo gaarsiin Soomaaliya.
Madaxa guddiga horumarinta midowga Yurub ayaa beeniyey hadalka ka soo yeeray wasiirka arrimaha debeda ee Soomaaliya, Andris Pebalgs ayaa si cad u sheegay in uusan waxba ka jirin hadalka ka soo yeeray Marwo Fowsiyo Yuusuf.
Mudane Andiris Peblags madaxa horumarinta midowga Yurub ayaa yiri ? waa runteed ma jirto lacag aan si toos ah u siinnay dowladda, taasna waxaa sabab u ah ma jiro maamulkii loo baahnaa ee isla xisaabtanka dhaqaalaha.? Peblags ayaa si kulul u sheegay in midowga Yurub ay siyaabo kala duwan u taageeraan Soomaaliya, sida warbaahintu werisay.
?Guulaha siyaasadda ee Soomaaliya keliya dhaqaalaha laguma bixin, ee waxaan mashaariic fara badan oo lacag ka badan 50 milyan oo Uero ay ku baxayso aan ka fulinay gudaha dalka, mashaariicda ayaa weli socda.? Ayuu yiri Andris Pebalgs
?Waxaan Soomaaliya ka caawinay adeegyada, horumarinta deegaanka, waxbarashada, caafimaadka iyo helista biyo nadiif ah.? Peblags ayaa xusay in mashaariicdaas ay hadda ka wadaan deegaanada Puntland iyo Somaliland
EU waxay sheegeen inay Soomaaliya geliyeen dhaqaale gaaraya 521 milyan oo Uero tan iyo sanadkii 2008, ururka ayaa sheegay in haatan mashaariic fara badan ay dalka ka fulin doonaan, isla markasna dhowaan dalka gaarsiin doonaan lacagihii New deal ee heshiiskii Brussels.
Wasiirka arrimaha dibedda ee Soomaaliya ayaa xustay in dalkeeda loogu ballan-qaaday shirkii lagu qabtay Brussels bishii September ee sannadkan lacag dhan 1.8-bilyan Euro, taasoo aysan weli dowladda Soomaaliya ?federaalka ah helin oo aan waxba laga soo gaarsiin.